Daahfuridii Saxarrada Atamka | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxamed Xirsi Faarax — April 28, 2020
1897 J.J Thomson waxa uu daaha ka qaaday in atamku uu ka kooban yahay elektaroono tabane ah cufkoduna aad u yar yahay marka lala barbar dhigo atamka. Markii la ogaaday in atamkku koronto ahaan yahay dhexdhexaad, waxaa khasab noqotay in il-togane ah ay jirto taas oo raad qaadideedi daaha kaqaaday in la ogaado borotoonka, kaas oo ah mid ka mid ah saxarada atamka.
Magaca: Sir James Chadwick
Dhashey: 20 october 1891
Dhintay: 24 junly 1974 ( da’ 82)
Borotonku waxa uu 1840 jeer ka culus yahay elektaroonada. Baaritaano badan oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in cufka atamku uu kadan yahay isku darka cufka elektaroonka iyo borotoonka. Tusaale ahaan cufka atamka hiliyom waxaa la filayey in uu noqdo labo jibaar ahaan cufka haydarojiinka laakiin waxaa la ogaaday inuu afar laab kabadan yahay cufka haydarojiinka, taas oo soo bandhig unoqotay jiritaanka saxar dhexdhexaad ah oo cufkiisu lamid yahay cufka borotoonka. 1932 Sir James Chadwick ayaa daaha kaqaaday jiritaankka saxar dhexdhexaad ah oo uu ugu yeeray niyuutaroon.
Ugu danbayn waxay ku ururtay in atamku uu yahay il-ma’agtay ka kooban sadex saxar oo kala ah elektaroon, borotoon iyo niyuutaroon.
Qaab dhismeedka atamka:
Markii la ogaaday in atamku yahay il-ma’aragtay culumada saynisku waxa ay isku dayeen in ay ogaadaan qaab dhismeedka atamka. Qaabdhismeedyo badan oo muujinaya qaab dhismeedka hoose ee atamka ayaa lasoo gudbiyey. Qofkii u horeeyey ee soo bandhigayna waxa uu ahaa J.J. Thomson.
Qaabdhismeedka Atamka ee uu soo bandhigay Thomson:
Tijaabadii kusalaysnayd tuubo danad tiran, Thomson waxa uu soo bandhigay in atamku leeyahay jirwayn oo saldanab togan oo ay ku baahsan yihiin elektaroono yar oo saldanab taban. Qaab dhismeedkaa waxa uu Thomson soo gudbiyey 1904tii.
Qaabdhismeedki Atamka ee uu soo bandhigay Rutherford:
Tijaabadii foylkii dahabka ahaa ee uu sameeyey Rutherford waxa uu meesha kasaaray qaabdhismeedkii uu soo bandhigay Thomson. Rutherford waxa uu muujiyey in atamku leeyahay saxaro yaryar iyo bu’ culus, Rutherford waxa uu qaabeeyey tijaabadiisa asaga oo isticmaalaya saxarada Alfa taas oo ay soodaysay curiye kaah-fale ah, tijaabadaas oo baaritaan u ahayd qaabdhismeedka atamka il-ma’aragtayda ah. Rutherford waxa uu yiri hadii Thomson saxan yahay, falaaruhu waxa ay toos u dhexmari lahaayeen foylka dahabka ah laakiin inta badan falaaruhu waxa ay dhexmareen foylka wax yar oo kamid ahna waa laleexiyey.
Magaca: Joseph John Thomson
Dhashey: 18 December 1856
Dhintay: 30 August 1940 (aged 83)
Qaabdhismeedkii Atamka ee uu soo bandhigay J.J Thomson
Tijaabadii uu sameeyey Rutherford
Dhashey: 30 August 1871
Dhintay: 19 October 1937 (da’ 66)
Udhashay: New Zealander
Kadib diidmadii uu kusameeyey aragtidii Thomson, Rutherford waxa uu soo gudbiyey aragtidiisa ku aadan qaabdhismeedka atamka asaga oo sheegay in atamku leeyahay dhex danabaysan oo ay kuwareegayaan elektaroono. Warqadii uu qorey bishii May 1911 waxa kaliya oo uu kusheegay in ay jirto xarun dhexe oo danabkeedu togan yahay ama taban yahay mana uusan isticmaalin magaca bu’.
Qaabdhismeedkii Atamka ee uu soo bandhigay Rutherford
Tags: Daahfuridii Saxarada Atamka
Next post Waa Maxay Atam?
Previous post Fayraska Karona: Saamaynta Dhaqaale ee Soomaaliya